Mitemo Yekushandisa - InstaZOOM
Nekushandisa webhusaiti yedu, unozivisa kuti unobvumirana nemirairo nemamiriro aya. Tapota iverengei nokungwarira uye iva nechokwadi chokuti munoitevera.
1. Zviri pamutemo kushandisa webhusaiti yedu.
2. Kukopa zvinhu zvine copyright hazvibvumidzwe.
3. Hazvibvumirwi kudarika instazoom.mobi paradzira mafaira akatorwa.
4. Iwe chete ndiwe une kodzero yekuashandisa nekuda kwezvinangwa zvako.
5. Hatinyore zvinoitika pamaseva edu.
6. Isu hatichengete mafaira pamaseva edu nekusingaperi.
7. Zvikumbiro zvekudhawunirodha zvinogadzirwa nevashandisi pachavo, sezviri muDMCA (Digital Millennium Copyright Act) zvakatsanangurwa.
Mitemo Yakazara Yekushandisa:
Kana iwe instazoom.mobi kushandisa kana kuenderera instazoom.mobi kuwana, unobvumirana nemitemo yekushandisa instazoom.mobi sezviri mugwaro rino. Hauna mvumo instazoom.mobi kana kushandisa masevhisi ayo kana usingagamuchire mazwi aya.
Iwe unobvuma kuti kambani inogona kukutumira zvigadziriso kune aya mazwi ekushandisa chero nguva uye pasina kupa zvikonzero. Unobvumawo kusungwa neshanduko dzenguva yemberi kuMitemo Yekushandisa iyi painongoiswa pawebhusaiti.
Kana iwe usingabvumirani neimwe yeaya mazwi ekushandisa, mvumo yako inopera kana ukatyora chimwe chezvisungo. Nekuda kwe instazoom.mobi rezinesi iri rinogona kugumiswa chero nguva uye pasina kupa zvikonzero.
Iri peji rakapedzisira kugadziriswa muna Ndira 1, 2014.
Kushandisa mafaira ezvinyorwa
Isu hatirekode chero IP kero kana mushandisi data kubva kune vashanyi vedu. Isu tinoshandisa Google Analytics kuona kuti vangani vanhu vanoshanyira webhusaiti yedu. http://www.google.com/analytics/tos.html
Isu tinoshandisa wechitatu bato advertising masevhisi kushambadza instazoom.mobi Kuratidza zviziviso. Mamwe masevhisi ekushambadzira anoshandisa matekinoroji akadai sekiki uye mabhikoni ewebhu pavanoshambadza pawebhusaiti yedu, izvo zvinotumira ruzivo nezvewe kuvashambadzi. Izvi zvinodikanwa kuti ndikuratidze zvishambadzo mumutauro wako. Verenga zvakawanda nezvesevhisi yavo pawebhusaiti yavo.
1. Usatyora chero mitemo munyika yako.
2. Usadhaunirodhe mimhanzi ine kodzero yekodzero yekodzero yekodzero yekodzero yekodzero yevaridzi zvisiri pamutemo.
3. Instazoom- Mafaira anogona kungoshandiswa kune zvinangwa zvake uye anogona kusapfuudzwa kana kugovaniswa.
Unobvumirana nemitemo nemamiriro aya nekushandisa webhusaiti yedu.
DMCA uye bvisa
- Ichi chishandiso chiri nyore che Instazoom kuwedzera mafoto.
- Isu hatitore mafaira emifananidzo.
- Iyi webhusaiti haitsigire mapirated makopi.
- Usati watibata, ndapota verenga peji ino: DMCA.
- Kana iwe uri muridzi wekodzero yemufananidzo uye uchida kudzivirira kutendeuka kwayo, ndapota titumire email.
Tichamira kushandura mifananidzo iyi.
Kana uine mibvunzo kana mazano pamusoro pebasa redu, tapota usazeza kutibata nesu: [email inodzivirirwa]